Zvinyorwa zvaSara Williams pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Sarah Williams
Sarah Williams muzvinabhizimusi anobva kuBerlin, kushambadza nyanzvi mukukurukurirana pamhepo. Tarisa uone yaanofarira yedhijitari kutanga kumusoro - Wingman Magazini - yepamhepo mararamiro magazini yevarume.
Chitatu, October 17, 2018 Chitatu, October 17, 2018 Sarah Williams
Paive nenguva yekuti kana iwe ukaivaka, ivo vaiuya. Asi izvo zvaive zvese pamberi peinternet ichizadzwa zvakanyanya nezviri mukati uye ruzha rukuru. Kana iwe wanga uchinzwa kushushikana kuti zvemukati zvako hazvisi kuenda kwazviri sezvaimboita, haisi mhosva yako. Zvinhu zvakangochinja. Nhasi, kana iwe uine hanya zvakakwana nezvevateereri vako uye bhizinesi rako, iwe zvachose unofanirwa kugadzira zano rekusundira zvirimo zvako kumberi